फेसबुक :: मानसी :: Setopati
‘प्रेम, सम्बन्ध अनि धोका.... जिन्दगीको चक्र !’ आर्यनको पछिल्लो स्टाटस।
हिजोआज निमेषसँगको निकटता बढेको छ। पैरवीसँगको सम्बन्धले पातलिएको भेटघाट फेरि बाक्लिएको हो मदिराको सहयात्राले। पैरवीको आग्रहमा पान, पराग, चुरोट, मादक पदार्थ.... सब त्यागेको थियो। अहिले त ऊ दुई–तीन पेग नलिई निदाउनै सक्तैन। अनि थपिएको छ डिप्रेसन..... औषधिको परीक्षण।
घरबाट ‘छोरी बिरामी भएको’ खबर आयो। मोटरसाइकल स्टार्ट गर्‍यो— घ्वार्र घ्वार्र....।
‘ओइ, अचेल तेरो स्टाटस निकै कडा आउँछन् त ! ‘केटीहरूले बडी मेन्टेन गरे जस्तै मन मेन्टेन गर्ने कुनै टिप्स छैन ?’ वाह ! घायल प्रेमी.... कस्तो शब्दसंयोजन ? कस्तो भावना ? मान्नुपर्छ यार तँलाई। तँ यो इन्जिनियरिङ पेसा छोड्दे यार, अब कवि बन् ! नत्र गजलकार बने पनि हुन्छ। कथाकार, उपन्यासकारै बनिस् भने त झन् अति गजब। अब तँ मेसिनको काम गर्न सक्तैनस्, तेरो मनले सेप छाडिसक्यो। ट्र्याकबाहिर गएको मनले कसरी मेसिनको काम गर्छ ?’
‘प्रेम पाउने कल्पना गर्नु। सफल प्रेमको कामना गर्नु। अनि अप्राप्तिमा विचलित मनको भावनासँगै मन बहलाउन उपाय खोज्नु......।’ लामो श्वास लियो, रसाएका आँखा स्थिर बनाउन आकाशतिर हेर्‍यो तर कुरा टुङ्ग्याउन सकेन आर्यनले।
‘तँ अझै आँसु बगाउँछस् उसका लागि ? तेरा सारा खुसी छिनेर गई, जसले....।’
शीतलता प्रदान गर्ने उसका शब्दले अन्तरहृदय पोलिरह्यो। त्यो पीडाको व्याख्या गर्ने शब्दै छैनन् मसँग। सीमान्त पीडा, अनि कष्ट महसुर गरें मैले। सम्बन्ध नराखेकी भए मेरो मनमा यति साह्रो चोट पुग्दैनथ्यो। मेरो अस्मितासँग गरिएको खेलबाड..... मृत्युपर्यन्त बिर्सने छैन म।’ पछाडि फर्किएर आँसु पुछी उसले।
बिदाको दिन चिडियाखाना घुम्न पुगेको आर्यनको मन त्यो कुराले अझ पर हुत्त्यायो। ‘सायद पैरवी पनि यही सोच्ती हो। ऊ पनि सीमान्त पीडामा पुगी होली। उफ्.... आखिर म पनि त एउटा भिखारी नै हुँ तर किन ऊ मलाई सामन्त र शोषक देख्छे ?’
चिडियाखानाको मूल द्वारबाट बाहिरिँदै गर्दा फेरि अर्को झुन्डमा सुन्यो— ‘चालु रैछ नि थाहा छ त्यो मान्छे त ? फेक आईडी बनाएर फेसबुक फ्रेन्ड त कति कति ? आज सरसरर्ती उसका म्युचुअल फ्रेन्ड हेर्दै गएको त.... ओ माई गऽड ! नाम पनि कस्तो कस्तो ? प्रायः सबैले भारतीय हिरोइनहरूको फोटो राखेका। अनि ऊबाहेक अरू साथी नै छैनन् रे। भनेपछि.... तँ आफै बुझ्न उसले कतिसँग फ्रेन्डसीप गर्दो रहेछ ?’
‘तँ जस्ता कति केटी होलान् ऊसँग। साताभर पालैपालो समय मिलाउँदो हो। त्यसो गर्दा पनि सात जना हुनुपर्‍यो। त्यत्ति मात्रै त के होलान् ? दिनमा पनि समय डिभाइड गरेर भेट्ने गर्छ होला। बिहान, दिउसो, साँझ.....।’ लाजै नमानी हाँसे गललल।
‘लाज, घिन, डरबिनाका छँडुल्लीहरू !’ रिसको पारो चढ्यो तर बोल्ने हिम्मत गरेन। आक्रोशमा पनि नचाहेरै पैरवीलाई सम्झ्यो। सायद ऊ पनि मलाई.....। पछाडिबाट टाउकोमा कसैले ह्यामरले हाने जस्तो भयो।
‘म तिमीप्रति अलि बढी नै उदार बने। मन उदार बनाउनुको मतलब बेपर्वाह तिम्रो गल्ती स्विकार्ने त होइन नि....’
‘हिजो उसले आफ्नो भर्जिनिटी ब्रेक गरी रे....।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३०, २०७५, ०२:५३:००